IKHITSHI NGAPHANDLE KWEEKHONKRITHI EZIPHATHEKAYO - IINDAWO ZOKUPHILA NGAPHANDLE
Eyona iindawo Zokuphila Ngaphandle Ikhitshi ngaphandle kweekhonkrithi eziphathekayo
Ikhitshi ngaphandle kweekhonkrithi eziphathekayo
Apha sabelana ngolwazi malunga nemiphezulu yeetafile zekhonkrithi zangaphandle kubandakanya ulondolozo kunye nemibono yoyilo.
Ukudala ikhitshi yangaphandle yindlela efanelekileyo yokuphucula indawo yakho yangasemva. Kukunika indawo yokwenza izitya ezimangalisayo, ukonwabisa, kunye nokonwabela ukutya nosapho kunye nabahlobo.
Xa uhlaziya okanye usongeza ikhitshi elingaphandle kwipatiyo okanye eyadini yakho, kukho izinto ezithile ekufuneka uzigcine engqondweni, ezinje ngohlobo lwecomputer oza kuyisebenzisa.
Imiphezulu yeetafile yekhitshi ekhonkrithi iza uluhlu olubanzi lwezibonelelo. Kwenye, zinemibala eyahlukeneyo kwaye zigqibile, zikuvumela ukuba wenze phantse nayiphi na imbonakalo onokuphupha ngayo ekhitshini lakho langaphandle. Ukongeza, izixhobo zokubala eziphathekayo zihlala zizinzile, kulula ukuzilungisa, kwaye zinokubonakala ngeendlela ezahlukeneyo.
Iindleko zekhonkrithi zangaphandle
Umxube wekhonkrithi yangaphandle weKhonkrithi
Seal eziphathekayo ukuba imiphezulu yeetafile zangaphandle
Uyakha njani iComputer yeKhonkrithi yeKhitshi yangaphandle
Esinye sezona zixhobo zibalaseleyo onokuthi uzisebenzisele ngaphandle imiphezulu yeetafile ikhonkrithi. Ikhonkrithi yomelele, ayibizi kakhulu xa kuthelekiswa nezinye iintlobo zemiphezulu yeetafile ekhitshini , ukumelana nobushushu kwaye kuhlala ixesha elide. Olunye ukhetho oludumileyo yigranite, quartz, ilitye lesepha kunye nethayile.
Imiphezulu yeetafile yekhonkrithi inokuqhekeka kwaye inokonakalisa ibonakalise umbala. Ukugqitywa koku kukuba iintanda zekhonkrithi zinokulungiswa kwaye phantse lonke olunye uhlobo lwe-countertop lunokuchaphazeleka kwaye lumbala wenze ikhonkrithi yahluke. Unyango kukuba usebenze kwaye ucoce ukungcola ikakhulu, iwayini, ioyile, ijusi okanye ikofu kwakamsinya nje ukuba zenzeke.
Imiphezulu yeetafile ekhonkrithi iya kufuna ulondolozo rhoqo njengokutywinwa kwamaxesha ngamaxesha ukuqinisekisa ukuba igcina umbala wayo kwaye ikhuselwe kukufuma okugcwele umphezulu wayo.
Umbuzo othandwayo odla ngokubuzwa kukuba ngaba imiphezulu yeetafile yekhonkrithi ingcono kunegranite? Impendulo yoku ngokusisiseko yehla ukuba loluphi uhlobo lomhlaba olubhenela kuwe nakwibhajethi yakho. Zombini ikhonkrithi kunye negranite zihlala ixesha elide ngekhonkrithi zibiza ixabiso elincinci ukufaka. Nangona kunjalo, i-granite etywiniweyo inokumelana nobushushu ngakumbi kunezinto zokubala zekhonkrithi. Zombini ezi ntlobo zinomphezulu ekulula ukuwucoca kunye nokugcina ukuba ukutywina kuyenziwa.
Ukufumana ubuchwephesha bokwenza imiphezulu yeetafile yekhonkrithi kubandakanya izinto, umsebenzi kunye nofakelo ungalindela ukuhlawula ngokomndilili malunga ne- $ 65 ukuya kwi-135 yeenyawo zenyawo nganye Iindleko ziya kuxhomekeka ikakhulu kwindawo ohlala kuyo ngokubhekisele kumaxabiso okwakha kwasekhaya kunye nohlobo lokwenza ngokwezifiso ukuba ngaba unqwenela njalo. Njengeprojekti ye-DIY unokuhlala ugcwalisa i-countertop yekhonkrithi ngokwakho ngaphantsi kweedola ezingama-300 kwizixhobo.
Ukwenza iitafile zekhitshi zangaphandle zilula. Isinyathelo sokuqala kwinkqubo kukufumana umxube apho ikhonkrithi iyakwenziwa khona. Zimbini iindlela zokuhamba ngokwenza umxube wekhonkrithi: yenzele kwangaphambili okanye uyenze ngokwakho.
Indlela yokuqala yokufumana umxube wecomputer yakho kukuthenga umxube owenziwe kwangaphambili kwivenkile yakho yentsimbi. Kukho inani lemixube esele yenziwe kwimarike, nganye inikezela ngezibonelelo ezahlukeneyo. Umxube onamandla aphezulu uphelele kubanini bamakhaya abafuna ukusebenzisa izixhobo ezinzima kwiitafile zabo zangaphandle. Ngokufanayo, ukuxubana okungahambelaniyo kunceda ekwandiseni ixesha lokuphila kwe-countertop yakho, ngakumbi kwindawo yangaphandle.
Ukuba awufumani mxube kwivenkile yehardware ehambelana nomdla wakho, ungasoloko ukhetha ukuzenzela umxube wekhonkrithi. Umxube wekhonkrithi unezinto ezintathu ezisisiseko zesamente, isanti kunye negrabile.
Umgaqo oqhelekileyo wesithupha ubeka umlinganiselo kwinxalenye enye yesamente, iinxalenye ezimbini zesanti, kunye neendawo ezintathu zegrabile. Kubalulekile ukunamathela kulo mlinganiso ukuqinisekisa ukuba ikhonkrithi inombala ofanelekileyo wecomputer yakho. Isibonelelo esinye sokwenza umxube ngokwakho kukuba unokukhetha izinto kunye nokwenza uyilo lwesiko.
Nje ukuba ukhethe okanye wenze umxube wekhonkrithi, kuya kufuneka wongeze amanzi. Amanzi kufuneka ongezwe kuphela kude kube ngumxube osebenzayo. Ukongeza amanzi amaninzi kumxube kuya kubangela ikhonkrithi ebuthathaka, engafanelekanga kwi-countertop yangaphandle. Amanzi amancinci kakhulu kumxube, nangona kunjalo, aya kwenza ikhonkrithi ingasebenzi kwaye kube nzima ukuyibeka kwi-countertop.
Unokukhetha ukuthulula ikhonkrithi endaweni yayo okanye uyigalele ngokwahlukeneyo kwaye uhambise i-countertop xa sele isetiwe. Isibonelelo sokuthulula ikhonkrithi endaweni kukuba awuzukuhambisa islab enzima xa sele ibekiwe. Ngokuchaseneyo, ukugalela umxube kwenye indawo kukunika indawo yokusebenza.
Emva kokuba i-countertop yakho yekhonkrithi isetyenziswe, unokulingwa ukuba uhambe ngokukhawuleza ukuyisebenzisa kwiibhokhwe zangasemva okanye ngamathumba e-crab. Ngenxa yokuba i-countertop yakho yenziwe ngekhonkrithi, iya kuba yindalo kwaye ibe yingozi. Umonakalo ungenzeka kumabala, ukuqhekeka, kunye nokufunxwa kwamanzi. Ukufuma kunokuba yingozi kakhulu kwimiphezulu yeetafile zekhonkrithi zangaphandle, njengoko zihlala ziphantsi kwezinto.
Indlela efanelekileyo yokugcina i-countertop yakho yekhonkrithi kwindawo efanelekileyo kukusebenzisa uphawu lwekhonkrithi. Ayisiyiyo kuphela itywina eliza kukhusela umphezulu wecomputer yakho, kodwa iya kwandisa umbala kunye nesheen. Kukho iintlobo ezahlukeneyo zokuthengisa kwiimarike, kodwa akubona bonke abakhethekileyo kwi-countertop yangaphandle.
Uya kufuna ukukhetha itywina elikhuselekileyo ekutyeni. Oku kuyakuqinisekisa ukuba akukho mntu ugulayo kuyo nayiphi na imichiza ukuba iimveliso zokutya zibekwe ngqo phezu komphezulu wetafile. Ukongeza, kuya kufuneka ukhethe itywina elishushu nelinganyangekiyo ekuqaleni.
Kungcono ukufumana imveliso engazukuchaphazeleka yijusi yelamuni okanye iwayini, njengoko ezi zinto zinemichiza zinokuchaphazela kakubi abanye babathengisi.
Izimvo zekhitshi lokuntywila ekhitshini
Emva kokuba ufumene umtywina ohambelana neemfuno zakho, ungaya phambili kwaye uyisebenzise kwi-countertop. Ngelixa imveliso nganye iya kuba nemiyalelo yomenzi wokuchaza inkqubo yokusebenzisa isitywina, kodwa kukho iingcebiso ezinokuba luncedo kwinkqubo.
Uya kufuna ukuqinisekisa ukuba umphezulu we-countertop ucocekile kwaye awunalo uthuli ngaphambi kokuba kufakwe isitywina. Kukulungile ukukhumbula ukuba kuncinci okungaphezulu xa kuziwa ekusebenziseni isitywina. Kufuneka ifakwe umaleko omnye ngexesha, ukuqinisekisa ukuba uyayinxiba umphezulu ngokulinganayo. Okokugqibela, qinisekisa ukuba umphezulu womile ngokupheleleyo ngaphambi kokuba usetyenziselwe ukupheka. Awufuni ukuya kuwo wonke umsebenzi onzima wokutywina i-countertop ukuze yonakaliswe ngelixa isemanzi.
Ngolwazi oluthe kratya nantsi ividiyo kuyo yonke inkqubo yokwakha ye- ikhitshi elingaphandle imiphezulu yeetafile kubandakanya ukwenza isikhunta kunye nokugalela umxube wekhonkrithi. Iindleko ezipheleleyo zeprojekthi ye-countertop kufuneka ibe ngaphantsi kwama-300.
iilokhwe ezimfutshane ezimnyama nezimhlophe zomtshato
izifungo ezingcono okanye ezimbi
ngaba ibhendi yomtshato iya phezulu okanye ezantsi
Iindwendwe zasehlobo zasehlotyeni zomtshato
izipho zakhe nezakhe zezithandani